トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Nepachinko yokumusoro of Regional zviri (musiyano bhizimisi gwara maererano dzomumaguta uye kumaruwa)
Sezvo nepachinko yokumusoro iri uyewo zvokutenga kambani, kwete zvitoro vechokwadi achangobva akunda vatengi. Naizvozvo, dzimwe maindasitiri pamwe, tiri kushanda nomumwe chitoro okutengesa itsika. Panewo zvaanoda chikamu kuti mari reshiyo uye zvakafanana, asi zvinoitwa munzvimbo kunogona kuonekwa zvikuru zvebhizimisi itsika.
Zvakadini kana musiyano, ngationei tichienzanisa musiyano pakati basa mumadhorobha zvitoro uye nemakanzuru zvitoro.
mumaguta nemaruwa vatengi, zvakasiyana panotaurwa kusarudza nepachinko yokumusoro. Urban vatengi, asi achauya kuti nepachinko yokumusoro kunangisa kuhwina, tiri kuuya kuchitoro nechinangwa vachiridza pane kukunda vatengi vemo. Big musiyano richabva ipapo dzimwe. Kushanda mabasa anosanganisira, asi pane zvakasiyana-siyana ezvinhu kuita zvakadai vatengi uye chitoro, pane imwe maitikiro kubudisa kakawanda uye Ball guru sezvo musiyano yokutsiva Xintai. In
nepachinko parlors, kuti vawedzere uchishandisa purofiti zvinganzi inokosha uchishandisa mabasa. kazhinji Urban zvitoro yokutsiva Xintai rinoitwa. Kunyange mumagazini nyanzvi dzakadai ikozvino, achingoita dzakashandisa Xintai mashoko anogona kuonekwa, mumaguta vatengi iwe anoda ichangobva tafura yakarova. Kukwikwidza chitoro akapoteredza
ndiko, kwangotangwa ichangobva Danho iri vachiri danho, kuti akwezve vatengi kuti chitoro chake kuda kosi kuwa. Vatengi vasiri kuuya asinganyimi bhizimisi. Kuti arege ezvinhu akadaro, vachiri adopter azvino pachikuva kukwikwidzana, zvinoreva kuti mutobvu kukwezva vatengi.
Zvisinei, kuzozivisa michina mitsva kutora mari yakakura. Chokwadi, mari anofanira vachamutswa akapora purofiti. Nokuti chinangwa ichi, muguta kuchitoro haigoni kutumbura bhora ose nguva chiitiko, tikaisa bhora iri chete dhefisiti chisarudzo nguva zviitiko zvakakura.
guta nepachinko yaiitirwa nokuda kukwezva vatengi, kushanda yakawanda zviitiko, panewo chitoro kuita muteuro kuchitoro. Nguva dzose zvakaoma kuratidza mumwe payout, zvinhu muguta nepachinko yaiitirwa ramambo nomutemo mukuru kuti kana kuti nyaya yacho Xintai, vazhinji kukwira kutarisirwa zviitiko kukwezva vatengi, zviri zvinhu zvakadai kuzvipfuudza. At yomunharaunda chitoro nekusiyana, Xintai yokutsiva chinhu shoma nguva mwedzi. Rare Achitaura yokutsiva uye
, asi pane Zvinogonekawo kuzozivisa ichangobva pachikuva, vakawanda kuchava kutanga kushandiswa tafura. Used anomira akaenzanisa ichangobva chemwenje, I mutengo iri kushoma. Nokuda kwechikonzero ichi, kwete bedzi chiitiko, zvichaita kuti pave mudanga payout kubva chakaipa.
nokubva mutengi nechigadziko, muchitoro kuti chikumbiro kuti vatambe yakaderera Rental bhora zvizhinji, omerera apo vatengi vari pasi-kudzoka zvakare kuorora nguva dzose kuridza nayo zvinhu pasi-njodzi. Chokwadi, muchitoro zvakare asi shoma kunobatsireiko zuva rimwe saizvozvo, zvichava yakatsiga kushanda uye profitability sezvo zvinogona richengetwe.
yakadzikama kuti chokubudisa purofiti, kufananidzwa dzomumaguta muzvitoro iri chiitiko, kuti yaizoitwa Gase zviitiko kuti kupandukira vatengi yaizova shoma.
muna nepachinko parlors, saka pachava nenzira dzakasiyana-siyana rokutengesa, asi kwete vose nepachinko yaiitirwa ichokwadi, saizvozvo kubva musiyano pakati nzvimbo ezvinhu uye vatengi ose akaitwa nhurikidzwa, guta nepachinko parlors uye nemakanzuru nepachinko yokumusoro uye ndiko kuti pane zvinokosha bhizimisi chezvawanyora zvakasiyana.
mupfungwa kuti zvamakataura ichi, zvingava uye makavaona basa werudzii Pachinkoya, payout, zviitiko, nezvimwewo, cherechedza kuti chitoro haana chinhu Ndakafunga kusvikira zvino inoshamisa kwazvo zvitoro It anoita. x000D_ kugadzikana nokuda kunobatsira, kunyange chiitiko zvichienzaniswa kuguta muchitoro, kuti yaizoitwa Gase zviitiko kuti kupandukira vatengi yaizova shoma.
mupfungwa kuti zvamakataura ichi, zvingava uye makavaona basa werudzii Pachinkoya, payout, zviitiko, nezvimwewo, cherechedza kuti chitoro haana chinhu Ndakafunga kusvikira zvino inoshamisa kwazvo zvitoro It anoita.